Mask တပ်ဖို့ တကယ်လိုရဲ့လား Mask တပ်နည်းကော မှန်ရဲ့လား – Good Health Journal
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) စပြီးဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ Positive Case မတွေ့သေးခင်ကတည်းက ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ Mask တွေအတပ်များလာကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဈေးကွက်ထဲမှာ ပစ္စည်းပြတ်တဲ့အထိ ဖြစ် လာပြီး ဈေးတွေလည်း အဆမတန်တက် လာပါတော့တယ်။ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အ ဆိုင် Mask တပ်နေကြတော့ Mask အုပ်မထားရင် မလုံခြုံဘူးလို့တောင် ထင်လာကြပါတယ်။
Mask က တကယ်လိုအပ်လာတဲ့အ ခါမှာ အလွန်အသုံးဝင်ပေမယ့် မလိုအပ် ဘဲမသုံးသင့်ပါဘူး။ သုံးတဲ့အခါမှာလည်း အသုံးပြုနည်းမှန်ကန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲသုံးပြီး အသုံးပြုနည်းမှားနေ ရင် ပိုတောင်ဆိုးမှာပါ။
အဲဒီတော့ Mask တပ်ဖို့ တကယ် လိုရဲ့လား။ ဘယ်သူတွေမှာ မဖြစ်မနေသုံး သင့်လဲ။ Mask တပ်နည်းကော မှန်ရဲ့ လား။ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
♦ Mask က ဘယ်လောက်အထိ အကျိုးသက် ရောက်မှုရှိပါသလဲ
Mask တွေကို နာမကျန်းဖြစ်သူ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးနေသူတွေကသာ မိမိ ဆီက ရောဂါကို တခြားသူဆီ မကူးစက် စေဖို့ တပ်ထားသင့်တာပါ။ အခုဈေးကွက် ထဲမှာ ရောင်းချနေတဲ့ Surgical Mask က သင့်နှာခေါင်း ဒါမှမဟုတ် ပါးစပ်ကို သင့်လက်နဲ့ မကိုင်တွယ်မိအောင်သာ ကာကွယ်ထားနိုင်ပြီး ရောဂါပိုးအမှုန်မွှား တွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ Mask တပ်ထားရုံနဲ့ ရောဂါမကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ လက်မကြာမကြာဆေးပေးမှသာ အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိမှာပါ။
♦ Mask အမျိုးအစားများ
ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ Mask အ မျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်။ ဘယ် Mask က ဘယ်လောက်ထိ အသုံးဝင်လဲ။ ထိရောက် မှုရှိလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
(၁) ပိတ်နဲ့ချုပ်တဲ့ Mask
• ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့သူတွေ တပ်လေ့ရှိ တဲ့ Mask တွေပါ။
• လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ ပါးစပ်၊ နှာ ခေါင်းတို့ကို လက်နဲ့ ယောင်ပြီးမကိုင်မိ အောင် ကာကွယ်ရုံကလွဲရင် ပိုးတွေမကာ ကွယ်နိုင်ပါဘူး။
• ပြန်လျှော်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
(၂) Surgical Mask
• ဈေးကွက်ထဲအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ Mask တွေပါ။ အစိမ်းရောင် အပြာရောင် Mask တွေပါ။
• အရည်တွေ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးလို့ တစ်ဖက်လူက နှာချေ ချောင်းဆိုးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က နှာချေ ချောင်းဆိုးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သလိပ်၊ တံတွေး နဲ့ နှာရည်တွေမစဉ်အောင် ကာကွယ်ပေး ပါတယ်။
• ရောဂါပိုးအမှုန်အမွှားသေးသေး လေးတွေကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။
• မျက်နှာနဲ့ ကပ်မနေတော့ လွတ်နေ တဲ့နေရာတွေကနေ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
• တစ်ခါပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ သုံးပြီး သား ပြန်မသုံးသင့်ပါ။
(၃) N-95 Respirator Mask
• နာမည်အတိုင်း လေထဲမှာပါတဲ့ ရောဂါပိုး အမှုန်အမွှား ၉၅% ကို မရှူ မိအောင် စစ်ထုတ်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
• မျက်နှာနဲ့လည်း ကွက်တိဖြစ်အောင် လုပ်ထားတော့ Mask နဲ့ မျက်နှာကြား လွတ်မနေတော့လို့ ပိုးတွေလည်း မဝင် နိုင်ပါဘူး။
• တစ်ခါပဲ သုံးလို့ရပြီး ဈေးကြီးပါ တယ်။
♦ Mask တပ်ရင် COVID-19 မကူးစက် နိုင်ဘူးလား
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ရောဂါပိုးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ COVID-19 က ကူးစက်ခံရတဲ့ အခါ ခုခံအားစနစ်ကျဆင်းသူနဲ့ နာတာ ရှည်ရောဂါရှိသူတွေမှာ ရောဂါဝေဒနာ ပြင်းထန်ပေမယ့် ရောဂါကူးစက်မှုပုံစံက တော့ တခြားကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဘယ်လိုကူးစက်လဲဆိုရင် ရောဂါရှိ သူတွေ ချောင်းဆိုးနှာချေပါက ဗိုင်း ရပ်(စ်)ရောဂါပိုးတွေ ခြောက်ပေအတွင်း ပျံ့နှံ့ရာကနေ တခြားသူဆီကို ကူးစက် တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဗိုင်းရပ်(စ်) ရောဂါ ပိုးအမှုန်အမွှားတွေဟာ လေထဲမှာ အချိန် ခဏပဲနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတ္တု၊ မှန်၊ ပလတ်စတစ်လို အရာဝတ္ထုမျက်နှာ ပြင်တွေပေါ်မှာတော့ ရက်အနည်းငယ် ကြာရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမျက်နှာပြင် တွေမှာရှိနေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို လက်နဲ့ ကိုင်မိပြီး မျက်နှာ၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းတို့ကို ထိမိရင် ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် ရောဂါရှိသူနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် မိရင် သူ့လက်မှာရှိနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုး က ကိုယ့်ဆီကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Mask တပ်ထားပေမယ့် လည်း ရောဂါရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ လက်တွေ ကို ကိုင်မိပြီး အဲဒီလက်နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ နှာ ခေါင်းတွေ၊ ပါးစပ်တွေ၊ မျက်စိတွေကို ထိမိရင် ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
♦ ဘယ်သူတွေ Mask တပ်သင့်လဲ
• သင့်မှာ ရောဂါကူးစက်ခံရတယ်လို့ သံသယဖြစ်နေရင် Mask တပ်ထားပါ။
• နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးသူတွေအနေနဲ့ မိမိဆီကရောဂါပိုး တခြားသူကို ကူးစက် တာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် Mask တပ် ထားရပါမယ်။
• နှာစေးချောင်းဆိုးရောဂါရှိသူ ဒါမှမ ဟုတ် ကိုရိုနာသံသယလူနာကို ပြုစုတဲ့သူ တွေ၊ ကုသတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း Mask ကို မဖြစ်မနေ တပ်ထားသင့်ပါ တယ်။
• ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်း လူနာ နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ Mask တပ်ထားသင့်ပါတယ်။
• လူအုပ်ထဲသွားစရာရှိရင်တော့ တပ် ထားတာပိုကောင်းပါတယ်။
♦ ဘယ်သူတွေ Mask မတပ်သင့်ဘူးလဲ
သင်က ကျန်းမာနေသူဖြစ်ရင် Mask မတပ်ပါနဲ့။
ကျန်းမာနေသူတွေအနေနဲ့ မလို အပ်ဘဲ Mask ဝယ်တပ်ခဲ့ရင် ဈေးကွက် ထဲမှာ ပစ္စည်းပြတ်လပ်ပြီး အမှန်တကယ် ဖျားနာသူ၊ နေမကောင်းဖြစ်နေသူတွေ အတွက် လုံလုံလောက်လောက် ရရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ရောဂါရှိနေသူတွေ Mask မရှိလို့ မတပ်ထားရင် သင့်ထံကို ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ ပိုများသွားမှာ ပါ။
ဒါကြောင့် ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ လူတစ် ယောက်အနေနဲ့ လူထူထပ်တဲ့နေရာကို လည်း မသွားဖြစ်ဘူး၊ နှာစေးချောင်းဆိုး ဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့လည်း ထိတွေ့တာမျိုး ဖြစ် မနေဘူးဆိုရင် Mask တပ်စရာ မလို ပါဘူး။
♦ Mask တပ်တဲ့အခါ
Mask တပ်တဲ့အခါမှာလည်း စနစ် တကျတပ်ဆင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ခါအသုံးပြုပြီးတိုင်းလည်း အသစ်လဲ လှယ်ရပါမယ်။
• Mask မတပ်ခင် လက်ကို သေချာဆေး ကြောပါ။
• Surgical Mask တပ်တဲ့အခါ အ ရောင်ရှိတဲ့ဘက်ကို အပြင်ဘက် ထား တပ်ပါ။
• Mask ကို လက်ကိုင်နေရာကနေသာ ကိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး Mask မျက်နှာပြင်ကို မထိမိပါစေနဲ့။
• Mask တပ်တဲ့အခါ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်း ကို သေချာဖုံးအုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး မျက်နှာနဲ့ Mask အကြား နေရာလွတ်မရှိစေရပါ။ လွတ်နေရင် လွတ်တဲ့နေရာကနေ ပိုးတွေ ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်ပါတယ်။
• Mask ကို လက်နဲ့ ခဏခဏမကိုင်ပါနဲ့။
♦ Mask ဖြုတ်တဲ့အခါ
• Mask ဖြုတ်တဲ့အခါ လက်ကိုင်ကွင်း နေရာကနေသာ ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပြီး Mask ရဲ့ အရှေ့မျက်နှာပြင်ကို လက်နဲ့ မထိမိ ပါစေနဲ့။
• သုံးပြီးသား Mask ကို ပြန်လည်အသုံး မပြုပါနဲ့။
• Mask သုံးပြီးတိုင်း Mask ကိုလိပ်ပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ သေချာလွှင့်ပစ်ပါ။
• Mask ကို ဖြုတ်အပြီးမှာ သင့်လက်ကို ရေ၊ ဆပ်ပြာ ဒါမှမဟုတ် Hand Gel နဲ့ သေချာဆေးကြောပါ။
♦ ကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းက . . .
Mask တပ်တာထက် ပိုပြီးထိရောက် တဲ့ ကာကွယ်နည်းတွေကတော့ . . .
• ဘာကိုကိုင်ကိုင် ပြီးရင် လက်ကို စနစ်တကျဆေးရပါမယ်။
• နှာခေါင်းတွေ၊ ပါးစပ်တွေ၊ မျက်လုံး တွေကို ခဏခဏ မကိုင်ပါနဲ့။
• တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက် ပါ။
• ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ကျန်း မာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစာတွေစားပါ။
• လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေ မသွား ပါနဲ့။
• ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့နေတဲ့နေရာတွေကို ခရီးမသွားပါနဲ့။
• နေမကောင်းတဲ့သူတွေနား သိပ်မ ကပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်နေမကောင်းရင်လည်း အိမ်မှာပဲ နားနေပါ။
• ဖုန်းတွေနဲ့ မကြာခဏထိတွေ့နေ တဲ့အရာတွေကို အရက်ပြန်နဲ့ ပိုးသတ်ပါ။